Munaasabad lagu qabtay Xamar Jajab” SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Munaasabadan oo lagu taageerayay mashruuca nalalka ku shaqeeya ileyska cadceeda oo maamulka gobolka Banaadir uu ka hirgeliyay degmada Xamar JaJab ee gobolka Banaadir isla markaana lagu soo dhaweynayay maalinta 8 Maarso oo ah maalinta xuska Haweenka Aduunka ayaa waxaa soo qabanqaabiyay maamulka degmada Xamar Jajab kaasi oo habeenkii xalay lagu qabtay xarunta degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir.
Munaasabada ayaa waxaa ka soo qeyb galay xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir qaar ka mid ah gudoomiyayaasha degmooyinka gobolka Banaadir mas’uuliyiin ka socotay Wasaarada Arrimaha gudaha,qaar kamid ah Haweenka ku nool degmada Xamar Jajab,Fanaaniinta Dhoolkacay ee ka dhisan degmada Xamar Jajab iyo dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid waaxyaha ay ka koobantahay degmada Xamar Jajab.
Intii ay munaasabadu ay socotay ayaa Fanaaniinta Dhoolkacay ee ka dhisan degmada Xamar Jajab waxaa ay ku soo bandhigeen Suugaan ka turjameysay horumarka ay maamulka degmada ay sameeyeen.
Guddoomiyaha degmada Xamar Jajab Axmed Cismaan Dhoore ayaa sheegay in maamulka degmada Xamar Jajab uu sii laba laabi doono dadaalka horumarineed ee ka soconaya degmada wuxuuna hambalyo u diray Haweenka Soomaaiyeed xuska maalinta 8 Maarso awgeed.
Guddoomiye ku xigenka gobolka Banaadir dhinaca howlaha guud C/casiis Cilmi Cali Xalane oo ka hadlay munaasabada ayaa ugu mahadceliyay maamulka degmada Xamar Jajab horumarka wanaagsan ee ka muuqda degmada.
La taliyaha arimaha Samafalka ee Wasaaradda Arrimaha gudaha iyo Federaalka Raage Cali Cismaan oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in ay soo dhaweynaya horumarka ka muuqda degmada Xamar Jajab.
W/D: Muuse Cismaan Abtow
RW. Cumar ayaa hambalyo ku aadan 8-da Marso u diray Haweenka Soomaaliyeen
Maamulaha xarunta agoonta gabdhaha Boondheere oo hambalyo u dirtay haweenka Soomaaliyeed "Sawirro"